Archive du 05-nov-2021
Minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola “Efa handoa vola izao ny fanjakana …”
Nilaza ny Fanjakana tamin’ny alalan’ny Minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rtoa Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison omaly,
Miroso anaty olana
Nitsoaka ny rivotra sosialista nanomboka tany amin’ny repoblika voalohany saingy noho ny faharavana maro nisy teto amin’ny firenena taorian’ny fanjanahantany moa dia tsy nahatafavoaka antsika tao anaty fahasahiranana izany.
Antoko AREMA Tsy manohitra ary tsy manohana fitondrana
Antony irosoana amin’ny famelomana ireo rantsa mangaika rehetra manerana ny nosy ny fiomanan’ny antoko Arema izay tarihiko amin’ny fifidianana rehetra misy eto Maagasikara hoy Rtoa Annick Ratsiraka omaly.
Boaderozy tratra teny Ambohimalaza Hiakatra fampanoavana anio ny raharaha
Bolabolana andramena na boaderozy 58 milanja 1,5 taonina no saron’ny zandary teny amin’ny Lalàm-pirenena faharoa (RN2) teny Ambohimalaza Distrikan’Antananarivo Avaradrano ny alakamisy 28 oktobra teo.
Depiote Fetra Ralambozafimbololona “Mpitandro filaminana sisa tsy mitokona eto”
Efa nampoizina daholo izao zava-misy eto amin’ny firenena izao, hoy ny depioten’i boriboritany fahadimy, Fetra Ralambozafimbololona,
Ambanin’ny rovan’i Manjakamiadana Nametrahana kofehy mena ireo faritra tandidomin-doza
Efa hatomotra ny vanim-potoanan’ny fahavaratra ka maro ireo olona mipetraka amin’ny faritra avo no tandindomin-doza.
Vidin’ny simenitra Antsasany na ampahatelon’ny eto ny any Maurice
Akora tena mampikaikaika ny Malagasy amin’izao fotoana izao ny fitaovana fanamboaran-trano sy fotodrafitrasa, ka mitana ny lohalaharana amin’izany ny simenitra sy ny vy.
Humaniste Ecologiste “Tandindomin-doza indray ny firenena”
a izao dia tandindomin-doza indray ny firenena atsy ho atsy, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Humaniste Ecologiste tetsy amin’ny Restaurant Tsiky omaly.
Menaka soja mampiahiahy “Vita ny fitiliana, azo antoka sy azo hoanina tsara”
Manoloana ny vaovao niely teny amin’ny tambazotran-tserasera, andro vitsivitsy lasa izay, mahakasika ny fisian’ny menaka fahandro izay lazaina fa tsy azo hohahina,
Raharaha volamena 73,5kg Efa eto Madagasikara ny tompon’ilay fiaramanidina ?
Efa ho feno herintaona afaka roa volana latsaka ny raharaha trafikam-bolamena nahatratra 73,5 kg sarona tany Afrika Atsimo ny 31 desambra 2020. Tsy tena misy tohiny firy intsony fa mangina tanteraka.
Dr Fidy Bariniaina “Mety variant vaovao mivelona amin’ny hafana ilay any Morondava”
Olona 24 isa no fantatra fa lasibatry ny valan’aretina Covid 19 any amin’ny distrikan’i Morondava. Amin’ny ankapobeny anefa dia toerana mafana Morondava no sady
Fikarohana ara-pambolena Nivoaka ny karazam-bary “Fy Vary 32” sy “Fy Vary 85”
Ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin’ireo tantsaha mpamokatra Malagasy no voalohany hisitraka ny Karazam-bary roa vaovao nomena ny anarana hoe: “Fy Vary 32” sy “Fy Vary 85”
Fananganana tsy ara-dalàna sy fandrodanana Tena efa lasa any amin’ny resaka kiboribory vetaveta
Niroso tamin'ny fandrodanana ireo tranom-barotra nambara fa naorina tsy ara-dalàna na "constructions illicites" ny biraon'ny prefektiora ny Kaominina Ambonivohitr’i Toliara ny 02 novambra teo,
Madagasikara sy Royaume-Uni Nosoniavina ny fiaraha-miasa lehibe ara-toekarena
Fanaovan-tsonia ny Fifanaraham-piarahamiasa ara-ekonomika eo amin'ny Governemantan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy i "Royaume-Uni" ary Irlande avaratra.
Varotra hani-masaka Mihena be ny mpividy, masiso am-pitoerana ny entana
Maina ny tsenan’ny varotra hani-masaka amin’izao raha araka ny fanadihadiana natao. Raha nahalany vary 10 kapoaka isan’andro ny mpivarotra iray teo aloha dia tsy misy afa-tsy 5 kapoaka sisa izany ankehitriny.
Tsy fahita hatramin’izay Ritra ny reniranon’i Mangoky
Ritra ny reniranon’i Mangoky ao Betroka, raha ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny lehiben’ny sampan-draharaha eo anivon’ny birao nasionaly misahana ny fitantana ny loza sy tandindon-doza na BNGRC, Paolo Raholinarivo.
Vaksiny Sinopharm Natao ho an’ny olona salama tsara
Vonona nanomboka omaly teto Analamanga ny vaksiny iadiana amin’ny Covid 19 izay vitan-dry zareo sinoa na ny Sinopharm.
Fahasalamam-bahoaka Miha maro ny olona marary , zaza ny 75%
Miha maro ny olona marary tato ho ato, hoy ny dokotera mpitsabo, Dr Mamy Ravelojaona. Eo ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny rivotra maloto, hoy izy.
Polisim-pirenena Notoloran’ny masoivoho Sinoa fitaovana
Tonga nitsidika ny Minisiteran'ny filaminam-bahoaka ary nanolotra fitaovana ho an'ny Polisim-pirenena ny Masoivohon'ny Sina Ramatoa Guo Xiomei omaly. "Gilets par balle ,
Fahasalamana Nanaovana fikaonan-doha siantifika ny tazomoka
Nanomboka omaly ary hitohy anio etsy amin’ny CCI Ivato ny fikaonan-doha siantifika andiany fahatelo ho fanohizana ny ezaka hizorana mankany amin'ny famongorana ny tazomoka eto Madagasikara.
Farmasia sy toby fitehirizam-panafody Nahemotra ny fandinihana ny « tolo-dalàna Voninahitsy »
Nodinihan’ny Solombavambahoaka tamin’ny fivoriambe azon’ny besinimaro natrehina omaly 4 novambra ny tolo-dalàna laharana faha-003-2021/PL
Annick Ratsiraka « Tsy vitan’olon-drery ny fampandrosoana ny firenena »
Tsy vitan’olon-drery ny asa fampandrosoana ny firenena hoy Rtoa Annick Ratsiraka omaly. Ilana fifanomezan-tanana izany hoy izy ary tsy tokony hijerena loko politika.
Vita Malagasy Hitohy ny fampahafantarana ny sangan’asan’i Hardi Bourges
Nanomboka tamin’ny hetsika filatroana goavana na défilé tetsy amin’ny Ange Doré Anosy ny 30 oktobra 2021 ny fampahafantarana ny sangan’asan’ilay mpanjaitra sy mpanakanto momba ny volo ary endrika amam-bika Malagasy,